Ukraine - Discover Ukraine. Ozi banyere mba maka mba ọzọ
Official asụsụ : Ukrainian
Ndị ọzọ na-asụ asụsụ : Russian
Ego : Ukrainian Hryvnia (UAH)
oge mpaghara : UTC +2
Draịva na : Right
akpọ code : +380
Bara uru n'isiokwu banyere Ukraine si EducationBro Magazine
Official Ukrainian Admission Center maka mba ọzọ ụmụ akwụkwọ
Best mahadum ịmụ nkà ọgwụ na Ukraine.
Eri nke ndụ na Ukraine maka mba ọzọ ụmụ akwụkwọ.
top 7 technical mahadum Ukraine
Ukraine bụ a president / Omeiwu Republic na ikike kewara n'etiti The President (Isi nke onyeisi ike), Verkhovna Rada (Legislative ike, nzuko omeiwu) na ikpe n'usoro ikpe. Isi n'iwu na-Ụkpụrụ Iwu adiaha na 1997 Ókè-ala-ya na Russia, Belarus, Poland, Slovakia, Romania, Moldova.
The isi obodo bụ Kyiv (Kiev).
The territorial ókè bụ 24 mpaghara.
Ukraine bụ mba dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe. Ukraine ókè-ala Russian Federation n'ebe ọwụwa anyanwụ na North-East, Belarus na North-West, Poland,Slovakia na Hungary na West, Romania na Moldova ka South-West, na Black Sea andSea nke Azov na South na Southeast, karị. Ọ nwere ebe 603,628 km², -eme ka ọ kasị mba kpamkpam n'ime Europe.
na 1999-2001, Ukraine jere ozi dị ka a na-abụghị na-adịgide adịgide so na UN Nche Council. Kemgbe ụwa, Soviet Ukraine sonyeere United Nations na 1945 dị ka otu n'ime ndị mbụ so na-esonụ a Western ikwere na Soviet Union, nke rịọrọ oche nile 15 nke ya n'otu mba. Ukraine ka anọgide na-akwado udo, negotiated na ógbè esemokwu. Ọ abuana ke quadripartite okwu na esemokwu Moldova ma na-akwalite udo mkpebi na-esemokwu na post-Soviet steeti Georgia. Ukraine na-mere ka a ọkpụrụkpụ onyinye UN nchebe udo arụmọrụ ebe ọ bụ na 1992.
Naa Ukraine nwere ọjọọ mmekọahụ Russian Federation.
Ukraine nwere a ukwuu n'ime ọnọdụ continental idụhe. Ọdịda na-N'uzọ ahaghị-ekesa; ọ bụ kasị elu na n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ugwu na kasị ala nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. Western Ukraine-enweta na 1,200 millimeters (47.2 sentimita asatọ) nke ọdịda kwa afọ, mgbe Crimea enweta na 400 millimeters (15.7 sentimita asatọ). Winters ịdị iche iche site jụụ tinyere Black Sea ka oyi ime ebe n'ime obodo. The nkezi kwa afọ okpomọkụ na Ukraine dịgasị n'etiti +5..+7 C na n'ebe ugwu na +11..+13 C n'ebe ndịda.
Ukraine enyene 8th ebe Europe site ọtụtụ ndị njem na-eleta, dị ka World Tourism Organisation rankings. Ukraine bụ a ebe ke crossroads n'etiti Central ha na Eastern Europe, n'etiti ugwu na n'ebe ndịda. Ọ nwere ugwu - na Carpathian Ugwu adabara ski, hiking, azu na ịchụ nta. The coastline na Oké Osimiri Ojii bụ a na-ewu ewu n'oge okpomọkụ ebe maka ezumike. Ukraine nwere ubi-vine ebe ha na nwa afọ mmanya, mkpọmkpọ ebe nke oge ochie castles, akụkọ ihe mere eme ogige ntụrụndụ, Orthodox na Catholic chọọchị dị iche iche nakwa dị ka a ole na ole alakụba na nzukọ. Kiev, na mba isi obodo nwere ọtụtụ ihe pụrụ iche owuwu ndị dị otú ahụ dị ka Saint Sophia Cathedral na sara mbara boulevards. E nwere ndị ọzọ obodo maara nke ọma na-eme njem nleta ndị dị otú ahụ dị ka ọdụ ụgbọ mmiri obodo Odessa na ochie obodo nke Lviv na n'ebe ọdịda anyanwụ. The Crimea, a obere "Afrika ha" n'onwe ya, bụ a na-ewu ewu ezumike ebe maka njem nleta maka igwu ma ọ bụ anyanwụ tanning na Oké Osimiri Ojii na ya ekpo ọkụ, Ala jupụtara na nkume ugwu, dị larịị nakwa oge ochie mkpọmkpọ ebe. Obodo e nwere na-agụnye: Sevastopol na Yalta - ọnọdụ nke udo ogbako na njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ. Ọbịa nwere ike na-ewe ụgbọ tours ụgbọ mmiri na Dnieper River si Kiev ka Black Sea coastline. Ukrainian nri nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na-enye dịgasị iche iche nke mbụ efere. Ịtụnanya asaa nke Ukraine na-asa akụkọ ihe mere eme na omenala ncheta nke Ukraine; ndị na saịtị na-họọrọ site izugbe ọha site na internet dabeere votu.
Ukraine foto gallery
Ukrainian Karpaty. Mountaints na Ukraine. Nature.
Odessa Black Sea. Port. Ukraine oké osimiri
Lviv n'okporo ámá. Mmadụ Bịa ka Ukraine.
Ukraine ọdịdị. Lake.
Ukrainian echiche. Lviv si Air.
Ukraine ọdịdị. River echiche. City
Ukraine bụ otu n'ime ndị kasị ibu ógbè dị na Europe.
Dị ka oruru, na ala asụsụ nke Ukraine bụ Ukrainian. Russian na-ebe kwuru, akpan akpan ke Eastern na Southern Ukraine. Ukrainian na tumadi kwuru na Western na etiti Ukraine. Na Western Ukraine, Ukrainian bụkwa ọchịchị kasị asụsụ na obodo (dị ka Lviv). Central Ukraine, Ukrainian na Russian-ma dokwara eji na obodo, na Russian ịbụ ihe nkịtị na Kiev, mgbe Ukrainian ibe ha bụ asụsụ nọ n'ime ime obodo. N'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda Ukraine, Russian bụ isi eji na obodo, na Ukraine na-eji na ime obodo ebe. Ndị a nkọwa ịkpata a ịrịba dị iche gafee iche iche e mere na-arụpụta, dị ka ọbụna a obere Ikwughachi nke a ajụjụ switches Ibọrọ nke a dị ịrịba ama nke ìgwè mmadụ.
English na-adịghị kwuru. n'etiti onwe ha, ndị dị na ya adịghị ekwurịta okwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọrọ onye na English, ọ dị mma iji kpọtụrụ na-eto eto. -Ekwu okwu na ndị obodo ahụ na n'ime asụsụ ọzọ bụ eleghi.
Ukraine si ahụike usoro bụ ala inye nkwado ego na unu kpamkpam dị ka ihe niile Ukrainian ụmụ amaala na ịdenyere aha bi. Otú ọ dị, ọ bụghị ná mmanye ka e mesoo na a ala-agba ọsọ n'ụlọ ọgwụ dị ka a ọnụ ọgụgụ nke onwe ọgwụ okụre adị mba. The ọha mpaghara mîdaha kasị ahụike ọkachamara, na ndị na-arụ ọrụ maka oji ọgwụ emmepe a na-retaining ha ala ọrụ dị ka ha na-chọrọ iji nye nlekọta na ahụ ike ọha ụlọ ọrụ na a mgbe niile.
Ukraine na-arụpụta ihe fọrọ nke nta niile ụdị njem ugbo ala na ugboelu. Antonov bụ ụgbọelu na KrAZ gwongworo na-exported ka ọtụtụ mba. Ihe ka ọtụtụ n'ime Ukrainian ebupụ na-ahịa ka European Union na CIS. ebe ọ bụ na nnwere onwe, Ukraine ka nọgidere na ya ohere gị n'ụlọnga, na National Space Agency of Ukraine (NSAU). Ukraine ghọrọ na-ekerechi òkè na nkà mmụta sayensị ohere ngagharị na ime N'ịchọpụta ọzọ. n'etiti 1991 na 2007, Ukraine ka ulo oru isii onwe mere Satellites na 101 igba egbe ugbo ala, na-anọgide na-chepụta ugboelu. The mba Mbubata kasị ike onunu, karịsịa mmanụ eke gas, na ruo n'ókè dị ukwuu na-adabere na Russia dị ka ya ike soplaya. mgbe 25 percent nke eke gas na Ukraine si esịtidem isi mmalite, banyere 35 percent si Russia na ndị fọdụrụ 40 percent si Central Asia site n'ụzọ pụrụ isiwo na Russia njikwa. N'otu oge ahụ, 85 percent nke Russian gas na-anapụta Western Europe site Ukraine. -Eto eto ndi nke Ukraine aku na uba na-agụnye ọmụma technology (IT) ahịa, nke topped ọzọ nile Central ha na Eastern Europe mba na 2007, -eto eto ụfọdụ 40 percent. Ukraine kwubara anọ na ụwa na ọnụ ọgụgụ nke gbaara ọkachamara IT mgbe United States, India na Russia.
The omenala Ukraine nri-agụnye ọkụkọ, anụ ezi, beef, azụ na mushrooms. Ukrainians na-agbasaghị na-eri ọtụtụ poteto, mkpụrụ, ọhụrụ na pickled akwụkwọ nri. Popular omenala efere agụnye varenyky (sie dumplings na mushrooms, poteto, sauerkraut, obi cheese ma ọ bụ cherị), borsch (ofe mere nke beets, kabeeji na mushrooms ma ọ bụ anụ) na holubtsy (stuffed kabeeji na-apụta jupụtara osikapa, carrots na anụ). Ukrainian specialties na-agụnye Chicken Kiev na Kiev achicha. Ukrainians aṅụ stewed mkpụrụ, juices, mmiri ara, buttermilk (ha na-eme obi cheese site na nke a), ịnweta mmiri, tii na kọfị, biya, mmanya na horilka.
Nke ugbu a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọnọdụ na mmetụta na mba ọzọ ụmụ akwụkwọ
Ugbu, mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na-apụghị ịmụta na mahadum dị na ókèala ndị Crimea na ụfọdụ obodo Donetsk na Lugansk mpaghara.
Otú ọ dị, kasị mahadum na-agafere ha ụlọ na obodo ndị ọzọ nke Ukraine na-anọgide na-azụ ụmụ akwụkwọ. EdukationBro adịghị nwere ike ikwu ụmụ akwụkwọ na-abịa na-amụ na mahadum na-ahụ nke dị na ókèala Crimea, Donetsk na Lugansk mpaghara. Education na ọzọ nke mba bụ nnọọ mma na ụmụ akwụkwọ na-adịghị eche ihe ọ bụla nsogbu mgbe na-amụ n'ebe.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil na Gas
Ivan Franko National University nke Lviv
Taras Shevchenko National University nke Kyiv
Poltava National Nka na ụzụ University
Ternopil Ivan Pul'uj National Nka na ụzụ University
The National University nke Ostrog Academy
Kharkiv National University nke Radioelectronics
Pryazovskyi State Nka na ụzụ University
Ukrainian Engineering na pedagogical Academy
National University of Physical Education na Sports nke Ukraine
Kyiv National University of Trade na Economics